घर > उत्पादनहरु > काठ बर्डहाउस > रंगीन काठ बर्डहाउस झुण्डिएको
Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादन कारखाना एक पेशेवर निर्माता र चीन मा पालतू आपूर्तिकर्ता को आपूर्तिकर्ता हो। हामी पाल्तु जनावर उत्पादनहरु, स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरु र अन्य धातु उत्पादनहरु को उत्पादन मा विशेषज्ञता। हामीले जनावरहरु संग मानिसहरु लाई अक्सर एक स्वास्थ्य साथी को सकारात्मक प्रभाव को कारण स्वास्थ्य र जीवन को एक राम्रो गुण को आनन्द लिईयो। तेसैले हामी रंगीन काठ को बर्डहाउस फाँसी को कोशिश शुरू। हाम्रो रंगीन देश Cottages बर्ड हाउस गहिरो विदेशी ग्राहकहरु द्वारा माया गरीएको छ, र हामी सन्दर्भ को लागी धेरै शैलीहरु छन्, सुन्दर ढंगले प्याकेज, र यो पनि उपहार को रूप मा दिन सकिन्छ।
घरपालुवा जनावर प्रेमीहरु द्वारा शुरू, फांसी रंगीन काठ बर्डहाउस हामी उच्चतम गुणवत्ता र सबैभन्दा नवीन विचारहरु संग उत्पादनहरु प्रदान गर्दछौं। यो सबै चराहरु को लागी एक उत्तम घर हो। उनीहरुलाई सुखी सुरक्षित र स्वस्थ जीवन दिनुहोस्।
हाम्रो फ्याँकिने रंगीन काठ बर्डहाउस विशिष्ट रूप बाट शिल्प गरीएको छ र जूट कर्ड सुरक्षित रूपमा झुण्डिएको को लागी संलग्न छ। यो पनि एक किनारा मा राख्न सकिन्छ। उच्च गुणस्तरीय काठ, चतुर विवरण बाट बनेको। एयर vents पक्षी स्वास्थ्य को लागी भित्ता र भुइँ खुल्ला को माध्यम बाट अधिकतम हावा भेन्टिलेशन को लागी अनुमति दिन्छ। सफा बाहिर ढोका सफाई को लागी सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ। चरा हेर्न र सजिलो सफाई को लागी महान। र हाम्रा उत्पादनहरु आकार मा उपन्यास, सावधानीपूर्वक कारीगरी, रंगीन शैली अधिक चराहरु लाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पेशेवर चीन रंगीन काठ बर्डहाउस झुण्डिएको निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, यदि म थोक गर्न चाहन्छु, तपाइँ मलाई के मूल्य दिनुहुन्छ? यदि तपाइँको थोक मात्रा ठूलो छ, हामी कारखाना price.You प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरको बिक्री र हामी बाट चीन मा बनेको उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु लाई आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य! हाम्रो उद्धरण कम छ। छुट किन्नको लागी स्वागत छ रंगीन काठ बर्डहाउस झुण्डिएको। अधिक जानकारी को लागी, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।